I-Golfer uSandra Haynie: I-Biography kunye neNkcazo yeMisebenzi
Ukususela kwiminyaka ye-1960 ukuya ngasekupheleni kwee-1970, uSandra Hayley wayengomnye wabanqobileyo kwigalufa yabasetyhini.
Umhla wokuzalwa: ngoJuni 4, 1943
Indawo yokuzalwa: Fort Worth, Texas
I-LPGA Championship: 1965, 1974
I-US Women's Open: 1974
• LPGA Umdlali wonyaka, ngo-1970
• Ilungu, iHoronto yeHlabathi yeHlabathi yoLwazi
• U-Sandra Haynie: "Xa usebenzisa indlela yegalufa, akukho mntu unokukuxelela ukuba wenzeni. Njengokuba ebomini, unikezwa ngeendlela ozikhethele zona;
• USandra Haynie: "Cinga ukuba ufuna ukwenzani, kungekhona into ongazifuni ukwenza."
Xa ephumelele i-US Women's Open and LPGA Championship ngo-1974, uHaynie wayengowesibili-golfer ukufumana izihloko zombini ngaloo nyaka (uMickey Wright wayengowokuqala).
USandra Haynie Biography:
USandra Hayley kabili wayishiya i-LPGA Tour, kuphela ukuba abuyisele kwaye aphinde amise iziqinisekiso zakhe. Walwa ne-arthritis ukudala i-Hall of Fame career. Kwaye unomlinganiselo ongaqhelekanga wokungazukuLPGA Umdlali wonyaka kunyaka apho aphumelele amaqhosha amabini; ngelixa ephumelela ukufumana umvuzo ngonyaka awunqobile ngayo.
UHaynie waqala ukudlala i-golf xa eneminyaka eyi-11 ubudala, kwaye ngasekupheleni kweminyaka ye-1950 yaqhayisa izikhundla ezininzi zaseTexas. Wajoyina i-LPGA Tour ngo-1961 kwaye wayengazange aphendule iminyaka engama-20 xa ephumelele umcimbi wakhe wokuqala, ngo-1962 i-Austin Civitan Open.
U-Haynie uzibeke ebalazweni ngokuwina i- LPGA ye- 1965. Waphumelela kane ngo-1966 kunye nezinye ezine ngo-1971; Ngo-1970 wawina kuphela kabini, kodwa uMdlali weNyaka uzukisa.
Kwakukho ngo-1974, nangona kunjalo, kwakungumnyaka wakhe ongcono. Wahokela uhambo ngeetrafi ezintandathu, kwaye ezimbini zazo zafika kwii-majors: i-LPGA Championship kunye ne- US Women's Open .
UHaynie waphinde wabangela ukhenketho ngo-1975 kunye nehlanu. Amashumi amathathu anesithoba kwiingqungquthela zakhe zengqesho ezingama-42 zavela ngo-1962-75.
Ngeminyaka engama-33 ubudala, uHaynie waqala ukuphelelwa yi-arthritis. Kwakhona wayenengxaki zesilonda kunye neminye imiba yokulimala eyenza ukuba, ngo-1977, aphelise iithamnethi ezithandwa embalwa nje ngonyaka. Wachitha iminyaka emithathu kakhulu kude negalufu, ixesha apho, iHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeFame ithi, waqeqesha umdlali we-tennis uMartina Navratilova.
UHaynie wabuyela kwixesha elipheleleyo le-LPGA ngo-1981. Okwesine kunye nenjongo yokugqibela yayingu-1982 du Maurier Classic , kwaye leyo yayiyiminyaka yokuphumelela kwakhe kweLPGA yokugqibela. Wagqiba okwesibini kwiluhlu lwemali ngaloo nyaka.
Ukongezelela kwimiba emine yezobugcisa, uHaynie wayegijimela kwezinye izihlwele ezisixhenxe.
Ukulimala kwamadolo kunye namadolo, kunye ne-arthritis ehlala ikhona, wanyanzeliswa uHaynie ukuba angaphumi igalofu kwakhona ngo-1985, kodwa wabuya kwakhona ngo-1988 waza wadlala iminyaka emibini.
Ukususela ngo-1982 ukuya ku-1992, u-Haynie wahlela ukuba "Ukunyuka kweArthritis" kwindoda ehloniphekileyo yokunyusa imali kwiSahluko saseNorthern Texas seSizwe seArthritis Foundation.
Ngaba Uvumelekile Ukuba Uqhube Ibhola LeGalofu Kuphuma kwi-Divot Hole Ngaphandle Kwesohlwayo?
Amagama aSebenzileyo kunye neeTired
Amazwe aseYurophu ngoMmandla
Iintetho ezili-10 ze-Teen Pop ze-All Time